Apetraho ny fampiharana
Midira na misoratra anarana
Manampia franchise maimaimpoana
Fanamboarana ny trano
Orinasa mpanao trano
Famokarana biriky malefaka
Famokarana entana simika fiara
Famokarana fitaovana fananganana trano
Famokarana kianja filalaovana
Famokarana rafitra vy
Famokarana simika ao an-trano
Famokarana vokatra plastika
Fanamboarana taratasy fidiovana
Fanamboarana ivon-toerana fanompoana
Fivarotana entana fanatanjahan-tena
Fivarotana sakafo ara-panatanjahantena
Klioba ady totohondry
Klioba baolina kitra
Sekolin'ny baolina kitra
Fivarotana kojakoja fiara
Fivarotana kojakoja mandeha ho azy
Fivarotana entana elektrika
Fivarotana firaketana Vinyl
Fivarotana injeniera momba ny fahadiovana
Fivarotana kojakoja ao an-trano
Fivarotana sakafo matsiro
Fivarotana vidiny raikitra
Fivarotana akanjo an-tserasera amin'ny Instagram
Fivarotana akanjo sy kiraro
Fivarotana akanjo volom-borona
Fivarotana fanaovana spaoro
Fivarotana fitafiana ho an'ny lehilahy
Cafe an'ny ankizy
Dobo filomanosana ho an'ny ankizy
Fampivoarana ny zaza
Fanaka ho an'ny ankizy
Fialamboly ho an'ny ankizy
Ivotoerana fanabeazana ho an'ny ankizy
Klioban'ny fanatanjahantena ho an'ny ankizy
Miasa ho an'ny ankizy
Sakafo an-dalambe ho an'ny ankizy
Sekolin'ny baolina kitra ho an'ny ankizy
Serivisy ho an'ny ankizy
Studio an'ny ankizy
Studios ho an'ny ankizy
Sekoly mitondra fiara
Bara fanaovana asa-tanana
Trano fisakafoanana Armeniana
Trano fisakafoanana italiana
Trano fisakafoanana Tiorka
Trano fisakafoanana Vietnamianina
Trano fisakafoanana Zeorziana
Agence momba ny trano sy tany
Masoivoho amin'ny Internet
Masoivoho mpifindra monina
Club ho an'ny tanora
Ararata izy mirahalahy
avy any Nazareta
ambony dia ambony
Farihy miolakolaka 2
Faritra manodidina an'i Mosko
Ho be ny
Nifoha i Polar
ny tanànan'i Krestovozdvizhenka
RP Akhtuba antonony
Tendrombohitry ny printsy
Tonga hatreny ambony
Tsipiky ny sisintany
vato eo amin'ny obi
St. Petersburg INSERT INT TBCITES (id, id_tbCountries, name, id_tbLangs, sysname) VALUES (USA)
Tsy misy fandoavam-bola voalohany
Fankalazana vola mitentina
Ilaina ny fampiasam-bola $
Tsy misy fampiasam-bola
Fampiasam-bola farany ambany hatramin'ny $ 500
Ny franchise mora indrindra amin'ny $ 1000
Francaise ambany vidiny hatramin'ny 2000 $
Fampiasam-bola kely latsaky ny 4000 $
Azo esorina mora foana hatramin'ny $ 10000
Francaise miaraka amin'ny fampiasam-bola kely hatramin'ny $ 20000
Fiantohana toekarena hatramin'ny 30000 $
Alaina kely hatramin'ny 40000 $
Ny franchise franchise dia tsy lafo amin'ny $ 50000
Orinasa miaraka amin'ny fampiasam-bola hatramin'ny $ 75000
Azo esorina hatramin'ny $ 100,000
Franchise lehibe mihoatra ny $ 100,000
Fivarotana franchise miaraka amin'ny mpanjaka
Franchises miaraka amina famerenam-bola haingana - afaka 1 volana
Francaise famerenam-bola haingana - manomboka amin'ny 1 volana ka hatramin'ny 3 volana
Famerenam-bola ny franchise manomboka amin'ny 4 volana ka hatramin'ny 1 taona
Ny fe-potoana famerenam-bola amin'ny franchise dia mihoatra ny 1 taona
Azonao atao ny misafidy sanda maro
Franchise an'ny vehivavy
Tombontsoa momba ny fianakaviana
Franchise an'ny ankizy
Fankatoavana ny tanàna
Ho an'ny tanàna kely, tanàna kely, tanàna kely
Franchise franchise Afaka miasa any an-trano ianao
Azo esorina vetivety
Francaise ho an'ny biby
Francaise mahasoa sy mahasoa indrindra
Manokatra fivarotana franchise
Fivarotana misy entana mora vidy
Franchise amin'ny Internet, fivarotana an-tserasera
Franchise avy amin'ny rangotra
Mandra-pahoviana no niasa ny fikambanana
1 ka hatramin'ny 3 taona
4 ka hatramin'ny 10 taona
11 ka hatramin'ny 20 taona
Maherin'ny 20 taona
Mikaroha amin'ny anaran'ny marika sy ny doka. Azonao atao ihany koa ny mitady amin'ny alàlan'ny naotinao manokana.
Misoratra anarana na midira raha hampiasa ny mombamomba anao
Tsy misy marika
Tsy misy fitarainana
Misy ny fifanoratana
Tsy misy fifanoratana
Nojerena ilay taratasy
Tsy nojerena ilay taratasy
Novaliana ny taratasy
Tsy voavaly ilay taratasy
Misy hafatra vaovao ho ahy
Asehoy ny mason'ny fikarohana rehetra
Doka hita: 983
USU - Rafitra fitantanana kaonty manerantany
Sarany voalohany: 0 $
Ilaina ny fampiasam-bola: 0 $
fianakavian'ny mpanjaka: 0 $
Payback. Isan'ny volana: 1
Sokajy: FANDAHARAM-POTOANA, nihevitra
Fandaharana ho an'ny karazan'orinasa rehetra! Tsy azo atao ny mifehy ny asan'ny orinasa sy ny sehatry ny asa rehetra ny orinasa tsy misy rindrambaiko. Isan'andro ny orinasa toy izany dia miteraka fatiantoka be satria tsy afaka mamakafaka ireo fahalemeny sy manatsara azy ireo. Ny rohy malemy dia mety ho zavatra rehetra: singa tsy ankafizin'ny olona izay manohy mividy amidy; serivisy tsy mitondra ny tombom-barotra andrasana noho ny dokambarotra ratsy; mpiasa ao amin'ny orinasa, izay tsy mahomby ny asany; ary maro hafa. Tongava solontenanay amin'ny firenenao na amin'ny tanànanao ary mahazoa vola amin'ny ampahany indrindra amin'ny solvent - amin'ny orinasa!
Misy video ve
Jereo ny famaritana feno
Azonao atao ny mividy ny fidirana premium mba hahitana antontanisa amin'ny antsipiriany
Ilaina ny fampiasam-bola: 10000 $
Payback. Isan'ny volana: 6
Sokajy: Akanjo vehivavy, Fivarotana akanjo
Ny mari-pahaizana momba ny akanjo ho an'ny vehivavy Femme dia an'ny vondrona orinasa Lady-Tex. Ny tantaran'ny fampandrosoana ny orinasa "Lady-Tex" dia nanomboka tamin'ny taona 2004 tany Belarus ary saika niorina teo amin'ny tsena rosiana ho mpanamboatra pataloha sy zipo avo lenta ho an'ny vehivavy. Ankehitriny "Lady-Tex" dia orinasa lehibe misy fotodrafitrasa famokarana any Belarus, iray amin'ireo mpitarika amin'ny sehatry ny akanjo ho an'ny vehivavy any ofice, ny fomba fiainam-piangonana, ary koa ny akanjo sy akanjo ho an'ny fotoana manokana. Tanjon'ny orinasa ny fanitarana ny fifamatorana ara-barotra, indrindra amin'ireo mpiara-miombon'antoka avy any Russia, manaraka ny fironana lamaody lehibe ary miezaka ny hahatonga ny vokatra ho mahaliana amin'ny faribolan'ny mpanjifa mifantoka amin'ny akanjo lamaody, avo lenta ary mora vidy.
Sarany voalohany: 30000 $
Ilaina ny fampiasam-bola: 3000 $
fianakavian'ny mpanjaka: 4 %
Payback. Isan'ny volana: 12
Sokajy: Ivon-jaza, Fampivoarana ny zaza
Famaritana ny franchise nataon'ny franchise: antony 2 hanokafana ny klioban'ny fialam-boly ho an'ny zanakao: - tsy fanao matetika ny mitsitsy zaza, - mbola tsy ampy ny foibe eto amintsika izay mandamina fialam-boly avo lenta sy isan-karazany ho an'ny ankizy. Inona ny tambajotran'ireo ivontoerana fialamboly ho an'ny ankizy BAZILLION: - ivon-toerana miasa any Minsk, Brest, Mogilev; - mihoatra ny 3 taona ny asa nahomby; - vahaolana tsara indrindra ho an'ireo ivon-toerana misy faritra sy toerana samihafa; - anao manokana ny famolavolana, ny filaharany ary ny fametrahana fitaovana; - andiana serivisy ho an'ny ankizy samy hafa taona - manintona, milina slot, animator, kafe, fialantsasatra; - ny rafitra ilaina rehetra amin'ny fikarakarana ny asa mahomby ataon'ny mpiasa. Tombontsoa amin'ny franchise BASILLION: * miasa amin'ny marika tokana izay atokisan'ny mpanjifanay * ny fihenan'ny habetsaky ny fampiasam-bola amin'ny fanokafana foibe ho an'ny ankizy
Sarany voalohany: 15000 $
Ilaina ny fampiasam-bola: 20000 $
fianakavian'ny mpanjaka: 7 %
Payback. Isan'ny volana: 18
Sokajy: Ivotoerana fanabeazana ho an'ny ankizy, fampianarana
Famaritana ny franchise amin'ny alàlan'ny franchise: Manjary ampahany amin'ny tambajotra Global Child an'ny klioban'ny fanabeazana iraisam-pirenena! Miaraha amin'ny iray amin'ireo mpitarika ny fanabeazana fanampiny eto amin'ny firenentsika. Androany ny Global Child dia: - mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny fanabeazana iraisam-pirenena ICEF; - Asa nahomby 7 taona; - fandaharana miavaka mihoatra ny 10 hampivelatra ny fahafahan'ny mpianatsika; - maherin'ny 1500 ireo nahazo diplaoma nahavita fiofanana; - tolotra ho an'ny sokajin-taona samy hafa - manomboka amin'ny 6 volana ka hatramin'ny 11 taona; - fisafidianana sy fanofanana mpampianatra efa za-draharaha sy psikology momba ny zaza; - fomba fanao tsirairay amin'ny ankizy tsirairay amin'ny sehatra rehetra. Ny fandaharan'asan'ny Ankizy Iraisam-pirenena dia mifototra amin'ny fomba fiasa tsy manam-paharoa an'ny rafitry ny fanabeazam-panahy. Ny klioba koa dia manome fotoana ahafahan'ny ankizy mianatra mianatra fiteny vahiny any Angletera, Malta, Espana ary firenena hafa, mamorona tambajotra mpiara-miasa hanohy ny fianarany amin'ny endrika maro samihafa.
Sarany voalohany: 10000 $
fianakavian'ny mpanjaka: 6 %
Sokajy: Ny fananana
Ny famaritana ny franchise nataon'ny franchise: RE / MAX LLC (RE / MAX LLC) dia natsangana 40 taona lasa izay tany Denver, Colorado, Etazonia ary miasa any amin'ny firenena maherin'ny 90 manerantany. Nanomboka tamin'ny Janoary 2014 dia tonga tany amin'ny Repoblikan'i Belarus ny RE / MAX. RE / MAX dia orinasa manerantany malaza sy azo antoka. Birao maherin'ny 7000 no miasa any amin'ny firenena 90 mahery, izay mampiasa mpiasan'ny trano 120 000 eo ho eo. RE / MAX Franchise RE / MAX dia orinasam-pankasitrahana iray izay mahaleo tena ny birao sy ny sampana tsirairay, saingy manaraka akaiky ny fitsipiky ny orinasa, ny fepetra amin'ny asa sy ny fiaraha-miasa ary ny fitsipi-pitondrantena sy etika no hajaina. RE / MAX dia manome modely ho an'ny mpandraharaha miaraka aminy manana maodely efa voaporofo efa vonona sy voaporofo miaraka amin'ny fanohanana feno mandritra ny vanim-potoana iasany, ahafahan'ny mpikambana tsirairay ao amin'ity tambajotra ity mahazo tombony amin'ny fampiasana ny sary sy marika amina orinasa iraisam-pirenena.
Ny fividianana franchise dia tsotra, ny tena zava-dehibe dia ny mifidy ny maodelim-barotra mifanaraka aminao. Azonao atao ny mividy izay rehetra ilainao amin'ny franchise, satria, amin'ny ankapobeny, dia omena anao ny sakana rehetra momba ny fampahalalana momba ny orinasa manomboka. Ny fividianana franchise dia mahasoa ihany koa satria afaka manomboka orinasa mitondra tombony be ianao nefa tsy misy vidiny marketing. Manome anao ny fampahalalana rehetra ilainao ny mpivarotra mba hanombohana mahazo vola amin'ny fotoana firaketana. Mila mividy franchise fotsiny ianao ary mankafy ny traikefa rehetra noforonin'ny olon-kafa taloha be talohan'ny nanapahanao hevitra hiditra amin'ity orinasa ity. Mazava ho azy, mila mahazo mari-pahaizana mifanaraka amin'ny zavatra mahaliana anao sy ny fahaizanao ianao. Ohatra, raha tsy manam-bola hanokafana rojo fisakafoanana ianao dia tsy ho afaka hividy franchise. Mazava ho azy, ireo orinasa manome fotoana ahazoana franchise manamarina ireo mety ho mpividy, ary ny lesoka amin'ity dingana ity dia tena tsy fahita firy. Raha manapa-kevitra ny hahazo franchise ianao, dia ianao no franchisee, mpividy mivantana an'ity maodelin'ny orinasa ity.
Afaka lasa mpandraharaha ianao ary mampiasa anarana izay efa henoin'ny rehetra. Mahazo foto-kevitra efa voaomana ihany koa ianao ary tsy mamorona na inona na inona avy amin'ny takelaka feno banga. Any Russia, ny lazan'ny franchise dia efa nalaza hatry ny ela ary tamin'ny 2021 dia iray amin'ireo maodelin'ny orinasa toa manome vola mora aorian'ny fampiasam-bola. Tsy ny zava-drehetra dia tsotra loatra, na izany aza, ny mividy franchise dia mbola mora kokoa noho ny mamorona orinasa amin'ny rangotra. Ny fisorohana ny vidin'ny famoronana sary famantarana, ny fanafoanana ny filana mamorona ny fombanao sy ny endriny manokana, dia manamora ny fandefasana ny maodelin'ny orinasanao. Ampy izay ny mividy ny fahalalana ilaina ary mampiasa azy io mba hampitomboana haingana ny volan'ny vola azo.
Ny fividianana franchise dia tsy midika hoe mividy azy maharitra. Azonao atao ny manofa ny fotoana hampiasa ny marika sy ny fitaovana rehetra miaraka aminy mandritra ny fotoana kelikely. Matetika, ny franchisea dia mandoa vola be. Ny fandraisana anjara mitambatra dia takarina amin'ny fotoana ahafahana mampiasa karazana asa fandraharahana, maodely efa misy raharaham-barotra, hahazoana loharanom-bola. Azonao atao ny mihetsika amin'ny anaranao, mampiasa ny haitao misy, mandany ireo akora efa voavoatra, ary mampihatra marika famantarana na marika iray. Izy io dia miasa tsara amin'ny toerana rehetra sy amin'ny firenena rehetra. Na izany aza, mety tsy afaka mividy franchise matetika ianao ary mampiroborobo izany amin'ny faritra misy anao. Ilaina ny mandinika tsara ny fahafaha-miasa ity marika sy maodelin'ny asa ity eo amin'ny tontolo eo an-toerana. Raha manapa-kevitra ny hividy franchise ianao, dia matetika no ilaina ny manamboatra ny modely efa misy.
Ity dia mety ho fanampina ny antsipiriany kely rehetra, ny mampiavaka azy, izay mampiavaka ny faritra misy anao ihany. Izy io dia manome fidirana mpanjifa bebe kokoa ary ny singa toy izany dia azo ampiasaina ho ampahany amin'ny fampielezan-kevitra dokam-barotra. Raha vantany vao nanapa-kevitra ny hividy franchise ianao, dia mila mihetsika avy hatrany mba handoa ilay famatsiam-bola. Ny franchise iray dia matetika mety ho endrika fampanofana mari-barotra. Raha ny fitsipika dia misy fifanarahana manokana eo amin'ny franchise sy ny franchisee. Ity ny fizotry ny fividianana franchise. Tarihin'ny fifanarahana amin'ny fampiharana ny asan'ny birao ianao ary hiakatra ny raharaham-barotrao.
Manoro hevitra anao izahay mba hividy ny franchise izay mahaliana anao ary ahafahanao mifanerasera mamokatra, ary koa mahazo tombony betsaka amin'ny fampiasam-bolanao. Mahazo valisoa avy aminao ny mpampindram-bola amin'ny fampiasany ny mari-pamantarana na ny fahalalany. Ary koa, ny famatsiana akora dia matetika omena amin'ny fifanarahana. Ireo singa fanodinana, fanofanana ny mpiasa, izany rehetra izany dia tafiditra ao anatin'ny fifanarahana. Ampy izay ny fividianana ny droite mifanaraka aminy. Azonao atao ny mahazo mari-pankasitrahana hitrandrahana ny tetika fantatra rehetra ampitaina aminao avy amin'ny mpivarotra. Ny fepetra fampiasana ny marika vokatra dia mifampiraharaha tsirairay ihany koa. Mety samy afaka sy henjana izy ireo, miankina amin'ny tanjona tadiavin'ny roa tonta izany. Ny tompon-trosa dia mandoa ny trosa amin'ny fahazoana mahazo mitantana raharaham-barotra rehefa mampiasa ny tetika eo am-pelatanany.
Azonao atao ny mividy tsy ny zon'ny fampiasana ny marika ihany fa ny fahalalana, teknolojia ary karazana loharano fanampiny mety ilainao mandritra ny hetsika miaramila.
Ny fivarotana franchise dia karazana sehatra iray izay anomezana marika isan-karazany ny sampana mba hisokatra amin'ny tanàna na firenena hafa. Ny fivarotana toy izany dia azon'ny olona mikasa hampivelatra ny orinasany manokana. Ny fivarotana toy izany dia miavaka amin'ny fisian'ny tolotra maro isan-karazany amin'ny endrika ankehitriny. Raha liana amin'ny franchise ianao dia any amin'ny fivarotana endrika manokana no tokony hikarohanao azy ireo. Zava-dehibe ny fivarotana toy izany manana ny isan'ny ilaina tolotra ilaina, raha tsy izany, tsy misy teboka ao. Ny zaridaina sy ny famaritana azy ireo dia tokony hojerena tsara, ary ny fivarotana dia afaka manampy ny olona te hanana fotoana hanatanterahana hetsika ara-barotra sasany mifanaraka amin'ny drafitra efa misy.
Ny franchise dia dingana iray na singa maromaro samihafa izay azon'ny mpividy hialana voly sy hampiroborobo ny azy manokana. Mandritra izany fotoana izany dia manampy ny tenany ilay orinasa nivarotra ny franchise. Tena mety ny mampiasa fivarotana ametrahana ny entana toy izany hahafahanao misafidy ny mety indrindra. Ohatra, ny mpampiasa vola dia mila manana fananana ara-bola ary te hitrandraka marika iray izay efa fantatra manerantany. Mandeha any amin'ny magazay fotsiny ilay mpampiasa vola ary mifantina ny vokatra sahaza azy indrindra. Raha toa ka misy famaritana amin'ny antsipirihany momba ny franchise ny fivarotana toy izany, dia afaka mandray fanapahan-kevitra avy hatrany ianao. Ny fepetra dia matetika resahina tsirairay, ary rehefa ny mpividy dia mividy afa-tsy ao amin'ny magazay ihany dia azo alamina ny fifaninanana. Izany dia fepetra ahafahan'ny mpanjifa misafidy ny tsara indrindra amin'izy ireo.
Ny magazay maoderina dia tsy maintsy miasa tsy misy kilema, satria asa lehibe io. Orinasa maro te hiditra amin'ny tsena mifanila vodirindrina no afaka mahita ao amin'ity magazay ity. Afaka mahita franchise tianao ianao raha mandeha any amin'ny depot toa izao. Tena mety izany satria ny fampahalalana ilaina rehetra dia omena amin'ny tranokala iray. Ny fampitambarana ny franchise rehetra amin'ny sehatra iray dia lasa depot tsara izay manome fotoana hividianana ireo vokatra mety indrindra amin'ny lafiny fitakiana. Raha mila toerana fitahirizana entana ianao dia azo jerena amin'ny Internet ny tranonkala toy izany. Ankoatr'izay, arakaraka ny maha-tsara ny magazay no mahabe ny franchise. Ny tolo-kevitra marobe dia manome fotoana tsara hanaovana safidy tsara.
Ny famaritana amin'ny antsipiriany momba ny franchise dia manampy anao hahatakatra raha mifanaraka amin'ny safidinao sy raha azo atao ny mampiroborobo azy amin'ny faritra iray. Ao anatin'ny fivarotana dia afaka mampitaha safidy isan-karazany ianao. Vokatr'izany dia azo atao ny misafidy ny tsara indrindra. Misaotra ny magazay manana tombony, ireo mpandraharaha te-hampiasa vola ara-bola ary hampiasa marika efa misy sy fanta-daza afaka manatanteraka ny drafiny haingana sy mahomby. Tokony hisy ny fitetezana mora hitady ny franchise marina. Ny fivarotana toy izany dia miasa amin'ny Internet, ary ny lazan'ireo marika napetraka eo aminy ireo dia miankina amin'ny fahamarinan-toerana sy ny fiarovana azy. Mazava ho azy, ny depot toy izany dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ary manana ny taratasy fanamarinana ilaina. Ny depotera maoderina dia tokony hanome fampahalalana feno momba ny vokatra atolony. Ny fivarotana franchise dia tsy maningana satria tsy maintsy mahafeno ny fepetra takian'ny toe-javatra maoderina.
Noho ny sehatra toy izany dia afaka mifanerasera am-pahombiazana amin'ireo solontenan'ny marika isan-karazany ianao. Azo atao aza ny mifampiraharaha raha toa ka voalamina tsara ny fivarotana franchise.
Rehefa misafidy fivarotana franchise, ny tena zava-dehibe dia ny tsy manao fahadisoana, satria asa tena lehibe io, satria ny mpampiasa no misafidy ny faritra hampiasainy hamatsy vola. Ny fivarotana franchise dia manome an'izay rehetra manana tolotra mahomby isan-karazany. Ny frankisialy dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny kaonty isam-paritra. Matetika dia ilaina tsotra izao izany ary famaritana amin'ny antsipiriany momba ny fepetra omen'ny mpivarotra ny mpividy ao anatin'ny magazay. Ny fepetra toy izany dia ahafahan'ny mpandraharaha iray mety hiditra amin'ny franchise hanao fanapahan-kevitra mety amin'ny drafitra toy izany.
Ny katalaogy franchise dia lisitr'ireo tolo-kevitra momba ny fampandrosoana orinasa ankehitriny miorina amin'ny marika efa malaza. Ny lahatahiry toy izany dia afaka ampiasain'ny mpandraharaha iray izay te hampiasa vola ara-bola ary tsy te-hampivelatra orinasa avy hatrany hatrany. Ny katalaogaly dia mety amin'ny olona toy izany. Ny franchise rehetra eny an-tsena dia voatanisa eto. Noho ny katalaogy toy izany dia azo atao ny misafidy ny akany tianao indrindra sy mety indrindra. Ny katalaogy toy izany koa dia ahafahana mifandray haingana amin'ny mpivarotra ary mametraka fanontaniana mahaliana. Ao anatin'ny sehatry ny boky torolàlana momba ny franchise, tsy ny tolotra rehetra mifandray ihany no tokony aseho, fa ny famaritana an'io karazana vokatra io. Noho ny famaritana dia azo atao ny mandray ny fanapahan-kevitra fitantanana marina sy mahomby indrindra. Tsy afaka manao tsotra fotsiny ianao raha tsy misy katalaogin'ny franchise raha toa ka mitady ny hisafidy ny safidy mety indrindra ny mpanjifa mety.
Iza amin'ireo katalaogy afaka maimaim-poana na andoavam-bola dia miankina amin'ny tompon'ny tranokala. Mandritra izany fotoana izany dia mandoa ny fahafahan'ny fandefasana amin'ny tranokala toy izany na fitaovana fampahalalam-baovao fanaparitahana hafa ny mpisava lalana. Noho ny boky torolàlana momba ny franchise dia azo atao ny manintona mpividy vaovao. Ny mpividy franchise dia antsoina hoe franchisee. Mahazo manararaotra manao asa arakaraka ny drafitra efa misy izy, izay omena ny mpanjifa. Ity tetikady ity dia novolavolain'ny franchise, raha ny franchisee tenany kosa dia miatrika ny vola ilaina amin'ny fikarakarana, ny fandefasana ary ny hetsika ataon'ny orinasa. Tena mety izany ho an'ireo olona manam-bola hampiasa vola nefa tsy te hamorona zava-baovao. Maka franchise efa voaomana izy ireo, izay tena mety amin'izy ireo. Etsy ankilany, ny katalaogy dia manampy anao hanao ny safidinao, handray ny fanapaha-kevitra tena marina momba ny fitantanana ary hahazo ny vola azo faratampony amin'ny vola izay napetraka.
Ao anatin'ny katalaogin'ny franchise dia azonao atao ny manondro ny haben'ny fandoavam-bola. Ity ny sandan'ny franchise, izay raikitra ary izay andraisan'ny mpiantoka ny franchise amin'ny dingana voalohany. Mety ho 10% eo ho eo amin'ny vidin'ny fanombohana izany. Mandritra izany fotoana izany, ao anatin'ny rafitry ny boky misy ny franchise, azonao atao ny manondro antsipiriany izay mamaritra ny teny fifampiraharahana amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Ohatra, ny antsoina hoe bizina fandraharahana dia azo omena bonus. Tsy inona izany fa ny lalàna mifehy mahomby izay miaiky ny fandaminana ny hetsika amin'ny fomba mahomby indrindra. Ny fiasa mitovy amin'izany dia natao hananganana orinasam-pandraharahana, fanombohana dokam-barotra, ary asa hafa mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa. Ilay antsoina hoe boky misy marika dia manampy anao hivezivezy amin'ny fomba fifampiresahana tsara amin'ny mety ho mpanjifa. Ao anatin'ny sehatry ny katalaogy franchise ihany, ireo singa ireo dia tokony ho faritana amin'ny antsipiriany ary izany dia manampy ny mpanjifa mety handray fanapahan-kevitra mety.
Raha havaozina ny katalaogin'ny franchise dia asio lisitra ny tolotra rehetra ankehitriny sy ny mpanjifa mety hahita ny tsara indrindra amin'izy ireo. Ny katalaogy toy izany dia mamela ny fivarotana franchise bebe kokoa satria miorina amin'ny tranonkala tokana izy rehetra. Ny katalaogy dia tokony hovolavolaina tsara sy hohatsaraina tsara. Ny fepetra toy izany dia manamora ny fivezivezena ary mahatonga ny fampiasana ny katalaogna ho mahomby sy mahafinaritra indrindra amin'ny fomba mpanjifa. Raha mila katalaogna ianao dia tsara kokoa ny manangona azy tsara sy mahomby. Ny frankisises dia tokony homena ny saina ilaina mba hahazoana antoka fa tsy misy lesoka ara-materialy mipoitra amin'ny famaritana azy ireo. Noho ny katalaogin'ny franchise, maro ny mpanjifa mety ho afaka mahita ny mpivarotra azy ary hanomboka hivoatra ny orinasa, ary hisokatra ny sampana vaovao any amin'ireo tanàna sy firenena mifanila aminy.
Ny katalaogim-bola mahomby dia tsy maintsy ampiarahina amin'ny fitetezana mora amin'ny mpampiasa hahafahany mahita ny vahaolana mety indrindra. Noho ny boky torolàlana momba ny franchise dia afaka miatrika ny asan'ny klerika ny mpanjifa rehetra ao anatin'ny fitadiavana vaovao mifanaraka aminy tsara indrindra.
Ny asan'ny franchise dia tsy maintsy asandratra amin'ny lalàna nomen'ny mpivarotra. Ny mpivarotra dia antsoina hoe franchise sy tsy mitovy amin'izany amin'ny zony hitrandrahana ny fahalalana-marika na mari-pamantarana, dia mahazo vola amina vola antsoina hoe franchise izy. Ilay iray kosa dia voatery mandoa ny anjara birikiny, izay afindra amin'ny zony hitarika orinasa amin'ny alàlan'ny teti-dratsy omena. Ny tetik'asa dia novolavolain'ny solontenan'ny franchise, ary ny vidin'ny fandefasana sy ny fanomanana ny orinasa kosa dia zakan'ny mpanafika ny tenany.
Ny franchise dia etsy andaniny, dia rafitra miasa mahomby izay mamaritra amin'ny antsipiriany ny fizotra rehetra, ny fepetra ary ny lafiny rehetra, izay mamela ny fitantanana orinasa amin'ny fomba mahomby indrindra. Mandritra izany fotoana izany, ny fizotry ny asa aman-draharaha dia tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ny fangatahan'ny franchise. Avy eo dia lasa mahomby araka izay azo atao ny franchise, ary omena ny orinasa ny habetsaky ny saina ilainy. Ireo mpandraharaha mahomby indrindra afaka maka tahaka tanteraka ny asan'ny klerjy, ary ny sasany amin'izy ireo aza manatsara ny asany. Ny fandidiana rehetra ary na ny fanovana aza dia resahina amin'ny mpivarotra, satria ireo no lalàna.
Aorian'ny famaranana ny fifanarahana dia azo atao ny manomboka orinasa mampiasa franchise. Ny fepetra toy izany dia ahafahan'ny mpanjifa mahazo tombony haingana amin'ny fampiasam-bola satria ny fanaovana franchise dia tsy inona fa fampiasam-bola amin'ny loharanom-bola amin'ny modely efa misy, mandroso tsara ary voaporofo. Ity maodely fandraharahana ity dia ahafahana manao asa birao amin'ny fomba mahomby, amin'ny fikajiana ireo mombamomba ny faritra. Indraindray dia tsy mandeha tsotra izao ny franchise raha toa ka tsy namboarina ny fizotran'ny asa aman-draharaha na ny toerana manodidina azy dia tsy mifanaraka amin'ny iray izay tao an-tanindrazan'ny tetikasa.
Hita eo amin'ny arabe amin'ireo tanànanao ny orinasa fanaovana franchise. Mety ho cafe, fivarotana, mpanety, na fikambanana hafa izy io. Na ny McDonald's sy KFC aza dia franchise izay manana laza avo lenta tokoa. Ny fanokafana franchise rehetra ary ny hetsika ara-barotra aorian'ilay tetika dia voatondro ao amin'ny fifanarahana. Nofaranana ny fifanarahana mba hifehezana ny fifanolanana rehetra ary hahafantaran'ny tsirairay ny zony sy ny adidiny. Raha toa ianao ka hanao orinasa franchise, dia mendrika ny hisafidianana karazana orinasa mety indrindra. Ary koa, ny fiheverana ireo mombamomba ny hetsika any amin'ny faritra misy anao dia zava-dehibe tokoa. Ohatra, afaka mandinika ny fivarotana pancakes nataon'i McDonald's any Russia isika. Ny fahafaha-manao maoderina hitantanana orinasa franchise dia manome vintana saika tsy manam-petra fahombiazana ho an'ireo olona izay manana loharanom-bola maimaimpoana ary te hampiasa azy ireo amin'ny fomba mahomby.
Ity karazana orinasa ity dia mandaitra kokoa noho ny fampiroboroboana ny marika amin'ny rangotra. Mpandraharaha iray efa nahavita namolavola modely toy izany ary mizara ny zavatra niainany tamin'ny isan-jato. Tena mety izany satria ny orinasa franchise dia manome anao fotoana mety tsy hamoronana zava-baovao, fa hampiasa safidy mahomby efa misy. Ny orinasa toy izany dia azo antoka fa miasa tsara raha toa ka tanterahina araka ny fitsipika voalaza ao amin'ny fifanarahana ny asa famokarana rehetra. Ny raharaham-barotra franchise dia hivoatra amin'ny hafainganam-pandeha raha toa ka mifanaraka amin'ny mpivarotra ny fanovana, izay hikajiana ny mombamomba ny faritra.
Ho an'ireo izay te-hanomboka orinasa marimaritra iraisana dia ilaina ny tranokala, katalaogy na fivarotana manokana, izay omena ny tolotra rehetra eny an-tsena. Noho ny fanampian'ny katalaogy toy izany dia afaka misafidy mora foana ny safidy mety indrindra ianao. Miaraha miasa amin'ny orinasan-dalàna, mifidy ny làlana mety indrindra ahafahanao miatrika tsara ny asa atao. Noho ny orinasam-pitanterana fotsiny dia maro ny olona no nampitombo ny kapitaliny voalohany. Aorian'ny fampiasam-bola amin'ny orinasa franchise, afaka manantena ny hahazo avo lenta ianao. Ny fiverenana amin'ity fampiasam-bola ity matetika dia somary avo. Io no miantoka ny halaza avo lenta an'ity karazana orinasa ity. Betsaka ny olona no te hampiasa vola ara-bola amin'ny maodely izay efa nozahana toetra sy voadio nandritra ny taona maro.
Mizarà amin'ny namanao na tehirizo ho anao irery ny adiresin'ity pejy ity
Fitantanana ny tranokala: info@FranchiseForEveryone.com
Raha mahita typo ianao, hanitsiana azy dia safidio amin'ny totozy ny lahatsoratra diso ary tsindrio ny bokotra Enter
Raha mahita typo ianao dia tsindrio eto raha hanitsiana azy